QQE Alert MTF V5 Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha QQE Alert MTF V5 Forex Tusiyaha
QQE Alert MTF V5 Forex Tusiyaha
QQE Alert MTF V5 Forex Tusiyaha waa nooc ah oscillatory ah tilmaame. Waxaa oscillates siinaya tilmaan ka mid ah labada arrimuhu hoos ama uptrend ah.
Tilmaamayaasha oscillation mararka qaarkood waa tilmaamayaasha ugu fiican tan iyo markii ay u muuqdaan in ay muujinayaan xataa bed-yar qiimaha suuqa marka loo eego tilmaamayaasha arrimuhu in kaliya muujinaya ee suuqa. Iyada oo tilmaamayaasha oscillatory, ay uga dhigto leh suuqa.
Hadda dib u tilmaanta! The tilmaame V5 QQE Alert MTF waxaa soo bandhigay suuqa kala gooni ah hoos shaxda ugu weyn ee ganacsiga. Waxa uu ka kooban yahay saddex lines in ay yihiin mid ah midabo kala duwan. The saddex lines lagu baayici karo oo ku saabsan line a. Si ka duwan inta badan oo ka mid ah tilmaamayaasha kale oscillatory, tilmaamahan oscillates ku saabsan line a at heerka ka mid ah 50 ee heerka toosan ee shaxda tilmaame ee halkii ay khadka eber.
qiyaasta toosan ee suuqa kala tilmaamayaasha waa firfircoon halkii guurto ah. Waxaa kala duwan taas oo ku xidhan heerka suuqa iyo arrimuhu.
lagugu tuday sawirka.1. The QQE Alert MTF V5 tilmaame
tilmaame ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay awoodaha heegan ah marka line u soo gudbo heerka konton iyo markii khadadka ka gudbaan. Si kastaba ha ahaatee qaylodhaan waxaa by default dhigay macnaha sida been la siininna. Waxay u baahan doontaa ganacsade si ay u qotomiyey sidii run, waayo, iyaga waa la soo saaray. qaylodhaan Kuwani noqon kartaa foomka of email, qaab cod heegan ama labadaba ku xiran tahay oo aad qotomiyey sidii run.
tilmaame ayaa sidoo kale masuul ka ah bixinta fariimaha pop up waa marka khadadka QQE ka gudbaan 50 heerka kor ama hoos u dhaqaaqin, marka khadadka QQE ah midba midka kale ka gudbaan kor ama hoos, marka khadadka QQE ka gudbaan 50 barbareeyo kor oo iskutallaabta line QQE iyo markii khadadka QQE ka gudbaan 50 heerka hoos oo iskutallaabta line QQE ah.
Isticmaalka tilmaamayaasha V5 QQE Alert MTF in gelinayn iyo xidhitaanka Xirfado.
ganacsade waa in fiira gaar ah marka QQE ka gudbaan konton heerka midkood kor ama hoos u dhaqaaqin. Kuwani waa calaamadaha ganacsiga ah. Marka QQE ka gudbaya 50 heerka hoos, ganacsade ah in la diyaariyaa waa in meel si iibiyay a. Marka QQE ka gudbaya 50 barbareeyo kor, ganacsade ah loo diyaariyo waa in meel amar iibsan a.
Waa inaad ogaataa in khadka cas ka hooseeyo oo dhan khadadka kale marka QQE ka gudbaya 50 heerka hoos u dhaqaaqin oo khadka cas waa ku xusan oo dhan khadadka kale marka QQE ka gudbaya 50 heerka kor u dhaqaaqin.
ganacsade waa meel iibiso ama iibsato bilowgii laambadda soo socda in ay qaab ka dib markii heerka 50 baxaday.
Fig.2. Ka baddesho iyo xidhitaanka amar isticmaalaya tilmaanta V5 QQE Alert MTF.
Si iibiyay waa in la xiray markii mid ka mid ah khadadka kale ka gudbaan line cas hoos halka si buy la xiray waa marka mid ka mid ah khadadka kale gudbo khadka cas kor.
QQE Alert MTF V5 Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
QQE Alert MTF V5 Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo QQE Alert MTF V5 Forex Indicator.mq4?
Copy QQE Alert MTF V5 Forex Indicator.mq4 in Directory Metatrader aad / khubaro / tilmaamayaasha /
Tusiyaha QQE Alert MTF V5 Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saar QQE Alert MTF V5 Forex Indicator.mq4 4 Chart?
article PreviousAuto Fibo Taxana Forex Tusiyaha
Next articleFX ahee Faa'iido Tusiyaha